DAAWOOYINKA LOOGU TALAGALAY XAMAAMKA: LIISKA DAAWOOYINKA LAGULA TALIYAY CUDURADA KALA DUWAN - BEERAHA DIGAAGA
Daawooyinka lagu taliyey for xamaamyada ka cudurada kala duwan
Shimbiraha, sida shimbiraha kale, waxay ku xiran yihiin cuduro kala duwan. Tirada fayraska shimbiraha ayaa kor u kacay tobankii sano ee la soo dhaafay sababo badan. Si loo ilaaliyo xayawaanka ka soo jeeda cudurada, daroogo badan ayaa loo soo saaray oo keliya ma aha ujeedo caafimaad, laakiin sidoo kale ujeedooyinka qarsoodiga ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo siiyo daawada ubaxyada.
Doorka daroogada ee nolosha qaxwaha
Cudurrada faafa ayaa si gaar ah halis u ah shimbiraha. Si looga hortago, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin ka hortag ah waqtigii loogu talagalay iyo in la ilaaliyo sharciyada wadaagista shimbiraha cusub.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad barato sida loo isticmaalo daroogada sida La Sota iyo Nifulin Forte for xamaamka.
Sharciga asaasiga ah ee la shaqeynta mukhaadaraadka waa isticmaalkooda iyadoo lagu saleynayo cilad sax ah. Shimbiruhu ma aha shimbiro aad u ballaaran, iyo daaweyn aan habooneyn, iyo sidoo kale qiyaas aan sax ahayn, waxay keeni kartaa dhimasho ama dhibaatooyin. Dhibaatada qiyaasta ayaa ah in inta badan qiyaasta loo qaato shimbiraha waaweyn - digaagga, berriga, turkiga iyo shimbiraha kale ee gudaha. Si loo xisaabiyo xajmiga waa mugga daawada halkii 1 kg ee miisaanka shimbirta. Haddii daroogada la siiyo cunto ama biyo, mugga ayaa loo xisaabiyaa tirada nambarka. Daawada waxaa sidoo kale lagu siin karaa hadal afka ah ama gaaban oo ah qaabka irbadaha.
Daawooyinka lagu taliyey ee xayawaanka
Waxyaabaha ku jira gargaarka degdegga ah ee loogu talagalay xamaamyada waa in lagu daraa hababka lagu daaweyn karo:
geedi socodka bararka;
Qalabka gargaarka degdegga ah waa inuu sidoo kale ku jiraa: 40% glucose, vitamins, sirinjiyo, tubooyinka, probiotics, antibiyootiko, macdanta vitamin-kakooban, coccidiostatics. Kuwa muddadii dheeraa waxay ku hawlan yihiin taranta qoryoolada, waxay sameystaan ​​daroogo gaar ah oo ku salaysan khibrad shakhsiyeed.
Antibiyootiko "Enroflon" ayaa loo isticmaalaa ujeedooyinka ka hortagga iyo daaweynta si loola dagaallamo jeermiska bakteeriyada ee saameynaya mareenka caloosha iyo habka neefsashada. Daroogada ayaa joojisa waxqabadka microflora pathogenic. Foomka fasaxa - dhalooyinka 100 ml.
Ma taqaanaa? Qoorgooyaha boostada ee qadiimka ah ee qarashka ku baxa wax aan ka yareyn mooshinka. Ninka ugu qaalisan caleemaha casriga ah ee Bolt ayaa lagu iibiyay 400 kun oo doolar. Rikoorkiisa waa 2700 km 18 maalmood.
Daawada ayaa loo qoraa:
mycoplasmosis, salmonellosis, colibacteriosis;
caabuqa burooyinka iyo sanbabada.
Qiyaas: 1 ml oo ah antibiyootig ah 1 l oo biyo ah, halkii aad cabi lahayd, ku siin kego ubax ah 4 maalmood. Si gaar ah, biyaha ayaa shimbiraha aan ku siinaynin. Sifooyinka arjiga:
waxaa lagama maarmaan ah in la xaddido joogsiga qoryaha qorraxda, maxaa yeelay taasi waxay yareysaa waxtarka daawada
lama isticmaali karo daawooyinka ay ku jirto potassium, kalsiyum iyo antacids;
Waa mamnuuc in la isku daro walxaha bakteeriyada, steroids, daawada xinjirowga lidka ku ah.
Waa muhiim! Waa suurtogal in la cuno hilibka iyo ukunta ee xamaamyada lagu daaweeyo antibiyootikada aan ka horeyn 2 toddobaad ka dib qadarka ugu dambeeya ee daroogada.
Antibiyootikada "Rodotium" waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada faafa, sida: staphylococcal iyo infekshanka streptococcal, mycoplasmas, spirochetes, jeermiska-diidmooyinka aan fiicnayn. Fasax sii-deyn ah - granules huruud ah, lagu duubo dhalooyinka caaga ah. Waxaa loo adeegsadaa ka hortagga caabuqyada bakteeriyada iyo daaweyntooda. Daawada ayaa loo qoraa:
Xalka waxaa loo diyaariyaa heerka 50 g ee daroogada halkii 100 g oo biyo ah. Si looga hortago, waxaa la siiyaa shimbiraha halkii ay cabi lahaayeen 3 maalmood oo isku xiga, daaweyn - 5 maalmood.
looma isticmaali karo daawooyinka loo isticmaalo daaweynta coccidiosis;
Waa mamnuuc in la siiyo xamaam oo leh beerka iyo kalyaha oo daciif ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato liiska cudurrada cambarka ee loo gudbiyo aadanaha.
Immunomodulator "Albuvir" waa wakiil liddi ku ah fayruska. U qor daawada daaweynta cudurada la xidhiidha fayrasyada RNA, iyo ka hortagga caabuqa fayraska. Foomka la sii daayo waa dhalo leh dareeraha cad ama jaale. Daroogadu waxay khuseysaa daaweynta:
paramyxoviruses (Cudurka Newcastle, naqshadda faayraska, cilmi baarista);
fayrusyada herpes (cudurada Marek, dhiig-yaraan infekshanka, ILT);
Xalka waxaa loo diyaariyaa heerka:
for prophylaxis - 0.03-0.06 ml 1 kg ee miisaanka jirka;
daaweynta - 0.09 ml 1 kg ee miisaanka jirka.
La aqbali karo sida qorshaha: 2 toddobaad + 5 cisho + 2 toddobaad. Nidaamka "Albuvir" wuxuu ku qoran yahay tilmaamaha daroogada.
Waa in aan loo isticmaalin dawooyinka kale ee fayraska ama antiseptics.
Tallaalka Lasotas waxaa loo isticmaalaa si looga hortago cudurka Cagaarshowga. Foomka sii deynta - kiniiniyada aerosol ama casaan, ku dhex biyo. Waxaa loo isticmaali karaa labo wiig Talaalku wuxuu soconayaa 3 bilood. Wixii xamaamka, waxaa loo isticmaalaa foomka aerosol by buufinta ee dovecote. Waqtiga buufinayaa waa 5 daqiiqo. Qiyaasta - 1 cu. miisaaniyada sanadka 1 cu. m square.
Ha isticmaalin walxo kale oo ku daweyn 5 maalmood kahor iyo tallaalka kadib;
ka hor tallaalka, biyaha qoryaha laga saaro oo la soo celiyo ka hor seddex saacadood ka dib.
Probiotic "Sportovit" waa immunomodulator kaasoo saameyn ku leh jidhka. Waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinka kahortaga iyo daaweynta si loo kiciyo nidaamka dheefshiidka iyo baabi'inta geeddi-socodka bararka ee mareenka caloosha, sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn liddi ku ah fayraska.
Tixgeli noocyada ugu caansan iyo noocyada caleemaha, iyo gaar ahaan kooxda Volga, qallajiye, waajib, qaxwaha cagaarka ah iyo xamaamyada iskudhaca ah ee Uzbekistan.
Foomka la sii daayo - dhalooyinka oo leh baakad joojin ah midab jaalle ah ama midab jaalle ah oo jaale ah laga bilaabo 10 illaa 400 ml. Sida wakiil prophylactic ah, daroogadu waxay kicisaa koritaanka chicks iyo xoojisaa nidaamka difaaca.
"Sportovit" waxaa loogu talagalay:
kakoobis, microsporia, trichophytia;
cudurada ba'an iyo dabadheeraad ah ee mareenka caloosha iyo mindhicirka, nidaamka beerka iyo kaadida;
war-celin otomaatik ah;
streptococci iyo staphylococci.
ujeedada loo yaqaan 'prophylaxis' - 0.03 ml 1 googo 2 jeer maalintii 7 maalmood;
daaweynta - 0.3 ml 1 shimbir maalintii 2 jeer maalintii 10 maalmood.
Ma taqaanaa? Qeybta ugu qaalisan ee xamaamyada adduunka ayaa ah xamaaradda caruuta. Waxay ka sii badan yihiin dakhliga qaraabadooda, waxayna gaari karaan ilaa 80 km / h.
Caawinta waxaa la siin karaa biyo ama cunto, iyo sidoo kale hadal ahaan. In beeraha xoolaha ee waaweyn, foomka aerosol ee codsiga daroogada ayaa loo isticmaalaa. Noocyada arjiga lama helin, looma diidin.
Video: wareysi laga soo qaaday qoraaga-soo-saaraha daroogada Sportovit - Tatiana Nikolaevna Kuznetsova
Probiotic "Intestev" wuxuu leeyahay saameyn liddi ku ah antiviral iyo bakteeriyada jirka, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa in lagu soo celiyo microflora mindhicirka. Waxaa loo magacaabay wakiil ka hortag iyo daaweyn. Foomka la sii deynayaa waa caddaan cad ama midab, oo lagu duubo caagadaha polystyrene ee 400 qiyaasood.
Akhri daawooyinka loo isticmaalo in lagu sumo sunta xashiishka.
Daroogadu waxay khuseysaa:
daaweynta xanuunka dysbiosis;
dib u soo kabashada jirka ka dib kiniiniga antibiotics;
dib u soo kabashada jirka ka dib markii la daweeyo duufaanka.
Probiotic waxaa la siiyaa biyo la cabbo ama cunto. Qiyaas "Intestevita":
si looga hortago, 0,5 qiyaasta qoob-ka-qaadashada ama 1 qiyaasta qashinka waaweyn ee 10 maalmood;
daaweynta - 1 qiyaaso oo loo yaqaan "chicks" ama 2 qiyaasood oo shimbiraha qaangaarka ah ilaa inta calaamadaha cudurka la waayo;
sida wakiil taageero ah 2 maalmood kahor tallaalka joogtada ah iyo 5 cisho kadib tallaalka qiyaasta daaweynta.
Ma taqaanaa? Kolleyga ugu weyn adduunka waa Doc Iac. Cuntadani Canadian-ka caadiga ah ayaa miisaankeedu yahay 1.8 kg. Miisaankaagu wuxuu ka badnaa miisaanka qoryaha ugu yar yar 60 jeer.
Antibiotic "Baytril" waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada faafa, iyo sidoo kale ka hortagga. Waxay saameysaa streptococci, mycoplasma, staphylococcus, salmonella, proteus iyo bakteeriyo kale. Foomka la sii daayo - xalka midabka huruudka ah ee dhalooyinka madow. Fiirinta walaxda waxay noqon kartaa 2.5%, 5%, 10%. Daawada ayaa loo qoraa:
cudurrada neefsiga: oof-wareen, rhinitis, bronchitis, laryngitis iyo kuwo kale;
Cudurrada faafa: salmonellosis, dysentery, mycoses kala duwan, colibacteriosis, iwm.
infakshanka fayraska ah ee labaad.
"Baytril" waxaa lagula talinayaa daaweynta hoos-u-dhac ku yimid kiniiniga iyo lafaha, iyo sidoo kale guuldarada kalyaha ama beerka.
Daaweynta xayawaanka, 5 mg 10% "Baytril" waxaa lagu qasi jiray biyo la cabbo (qadar shimbir ah). Codso halkii aad cabi lahayd 3 ilaa 10 maalmood, iyadoo ku xiran calaamadaha. Si looga hortago caabuqyada bakteeriyada, daaweynta waxaa loo isticmaalaa 2-4 maalmood. Xaaladdan, 1 ml ee daroogada ayaa lagu kala diraa 2 litir oo biyo ah. Sifooyinka arjiga:
haddii daboolka shidan uu jabo, xalku wuxuu noqdaa daruur, kadibna lama siin karo xayawaanka;
oo aan loo isticmaalin tallaalka cudurka Marek, "Levomitsetinom", daawooyinka nonsteroid anti-inflammatory, antibiyootigyada kale;
looma isticmaali karo haddii ay jirto difaac ka mid ah daawooyinka lidka bakteeriyada ee quinolone.
Waa muhiim! Haddii antibiyootiko aysan soo bandhigin natiijooyinka 3 maalmood gudahood laga bilaabo bilowga daroogada, waa in la bedelaa. Xaaladdan waa suurtagal haddii xayrtu ay leedahay fal-celin shakhsiyeed daroogada, iyo sidoo kale haddii daaweynta loo qoro si qaldan.
Dhakhaatiirta xoolaha waxaa ku jira kala duwanaansho ku saabsan aragtida isticmaalka "Baytril" sida wakiil ka-hortag ah. Khubarada qaarkood waxay aaminsan yihiin in isticmaalka qalliinka uu yareynayo jiritaanka daroogada ee daroogada haddii daaweynta cudurada faafa loo baahan yahay.
Hawlaha caafimaadka xoolaha, qalabka waxaa lagula talinayaa xayawaankaas kuwaas oo ay jiraan xaalado cudur oo infekshin leh.
"Trichopol" waxaa loola jeedaa daawooyinka bakteeriyada iyo daawooyinka antiparasitikada. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta daaweynta iyo ka hortagga caabuqyada jirka oo leh xarumo fudud iyo aerobes fudud. Giamblia, trichomonads, balantidia, amboebas, bacteroids, fuzobakterii, xirtidkani waxay u nugul yihiin daawada. Foomka sii deynta - Kiniiniyada cad iyo budada. Hawlaha caafimaadka xoolaha, isticmaal foomka budada.
"Trichopol" waxaa loo xilsaaray:
Waa muhiim! Marka lagu buufinayo aerosol, qofka afka iyo sanka waa in lagu ilaaliyaa faashad suuf ah, jidhka - dhar, indho indheyn iyo muraayado kale.
daaweynta: 1 kg oo ah miisaanka qaddarka, 150 mg oo ah daroogada waxaa la siiyaa hal mar maalintii 10 maalmood;
ee ka hortagga: 3 koorso oo daroogo ah muddo 5 cisho ah oo dhexda u dhaxeysa 14 maalmood, qiyaasta: 0,25 g halkii 1 kg ee miisaanka.
Ma jiraan wax iska hor-imaad ah oo lagu qaato daroogada.
Fosprenil "Antiviral" oo loo yaqaan "Fosprenil" ayaa leh hanti labbaad ah oo loogu talagalay daaweynta caabuqyada fayraska, iyo in la kordhiyo caabbinta jirka ee jirrooyinka iyo yareynta cudurrada. Daroogadu waxay dhaqaajisaa dheef-shiid kiimikaad hoose. Foomka la sii daayo - xalka dhalada 10 iyo 50 ml.
Waxaa loo isticmaalaa fayraska soo socda:
Xalka waxaa la diyaariyaa heerkul ah 0.1 ml halkii 1 l oo biyo ah waxaana loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xamaamka ugu yaraan 7 maalmood. Haddii calaamadaha cudurku la waayay, markaa waxaad joojin kartaa inaad qaadato 2-3 maalmood. For prophylaxis, 0.005 ml of walax kasta kg ee miisaanka shimbirta waxaa loo isticmaalaa 20 maalmood. Ma jiraan wax khilaaf ah oo loo adeegsado "Fosprenil". Shimbiraha in ay u nugul yihiin qaybaha daaweynta, cuncun iyo finan maqaarku waa suurto gal. Steroids oo la socda Fosprenil waxay yareyn kartaa saameynta daaweynta ee daaweynta.
Ma taqaanaa? Qaadku wuxuu leeyahay aragti gaar ah. Indhihiisu way kala duwan tahay 75 shilin halkii labaad, halka ninku yahay 24 oo kaliya. Indhaha indhuhu way kala duwan yihiin, laakiin xitaa raajada ultraviolet.
Daawada antibiyootikada "Furazolidone" waxaa loo isticmaalaa bakteeriyada-gram-positive iyo bakteeriyada aan fiicneyn, chlamydia waxayna ka tirsan tahay kooxda nitrofurans. Waxaa loogu talagalay maamulka afka ee daaweynta isku dhafan iyo ka hortagga cudurada viral-bakteeriyada iyo cudurada. Foomka lagu sii daayo - Kiniiniyada ama budada jaalaha ah.
infakshanka joogtada ah;
ka hortagga dhibaatooyinka faafa.
Xalka waxaa loo diyaariyaa heerka 3 g halkii 1 kg ee miisaanka qofka nool:
daaweyn caafimaad - koorasku waa 8 maalmood, oo lagu celiyo 2 toddobaad kadib haddii loo baahdo;
for prophylaxis - kooraska waa 5 maalmood.
ha siinin shimbiraha daciifka ah ama hargabka;
laga mamnuucay in la joojiyo xannuun la'aanta joogtada ah;
laguma dari karo antibiotics kale;
laguma talin in lagu daaweeyo daroogada.
"Furazolidone" ma keento saameyno kale waxayna badanaa si fiican u dulqaadanayaan xamaamyada.
Antibiyootigga "Tiamulin" waxaa loo isticmaalaa infakshanka caloosha iyo xakamaynta habka neefsashada, waxay leedahay ficilo fara badan oo faafin. Foomka sii deynta - budada huruudka ah, barxan biyo.
"Tiamulin" waxaa loo soo qoray:
xanuunka bacterial dysentery;
Baro naftaada oo dhan sifooyinka ilaalinta xamaamka guriga, iyo gaar ahaan xilliga jiilaalka.
Si looga hortago, budada waxaa lagu daraa quudinta heerka 11.5 mg oo ah firfircooni ah 1 kg ee miisaanka shimbir ama 25 g halkii 100 litir oo biyo ah. Qaado 3 maalmood 4, 9, 16, 20 usbuuc nolosha nolosha xayawaanka yaryar. Ujeeddooyinka daaweynta, budada ayaa lagu daraa quudinta qiyaasta 23 mg oo firfircoon oo ah 1 kg oo ah qashin ama 50 g halkii 100 litir oo biyo ah. Qaado 3-5 maalmood gudahood. Dabulin lama qorayo:
isla mar ahaantaana daawooyinka antibiyootigga ah iyo daawooyinka loogu talagalay daaweynta coccidiosis;
gudaha 7 maalmood ka hor iyo ka dib daaweynta antibiyootikada iyo coccidiostats, iyo sidoo kale diyaargaroowga ay ku jiraan maadooyinka monensin, narasin, salinomycin, maduramycin.
Waa muhiim! Cadaadiska jidhka bini'aadamka waxaa keena noocyada staphylococcal. Caabuqa ugu caansan wuxuu dhacaa iyada oo la isticmaalayo hilibka shimbiraha qaba staphylococci.
Sida looga fogaado cudurka: tallaabooyinka ka hortagga
Tallaabooyinka ka hortagga ah ee ilaalinta xamaamyada waxay ka kooban tahay tallaabooyin lagu ilaalinayo nadiifinta guriga nadiifinta, kormeerka xaaladda caafimaad ee shimbiraha iyo kaalmada caafimaad ee waqtigeeda. Qorshaha ka hortagga waxaa sidoo kale ka mid ah:
nadiifinta quudinta iyo cabista - toddobaadle;
xakamaynta nadiifinta guriga waa: 3% - laba jeer sannadkii, nadiifinta qashin - 1 jeer 2 asbuuc, daaweynta biyaha kulul ee hudheellada iyo hudheellada - 1 mariba rubuc;
Isticmaalka daawooyinka qandho gala si looga hortago cudurrada faafa;
ka hortagga marxaladaha ectoparasites;
ka fogaanshaha shimbiraha duurjoogta ee guriga qoryaha;
karantiilka xashiishka cusub;
sameynta gargaar caafimaad oo waqtigeeda ah si loo ogaado calaamadaha cudurka.
Si looga fogaado cudurada, nasiib daro, way adag tahay. Laakiin waxaad yareyn kartaa khatarta caabuqa oo aad yareyn kartaa saameynta xoolaha. Iyo daaweynta waqtigeeda ayaa kaa caawin doonta inaad iska ilaaliso dhimashada qiimaha qaaliga ah ee xamaamka.
Video: daaweynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee xamaamadda
Geranium ayaa ka baxaya xitaa: maxaa sababay tani waxay dhacaysaa iyo sida loo caawiyo dhirta? Tallaabooyin ka hortag ah
Sidee u koraan geed ochwood beerta beerta
Seeds ayaa la xaqiijin doonaa Maarso
Badanaa, beeralayda, xitaa waayo-aragnimo weyn ee orchids sii kordhaya, waxay la kulmaan dhibaatooyin qaar. Inta badan waxay la xiriiraan nidaamka asaasiga ee quruxda qalaad. Dhirta ubaxyada ah ee ubaxu waxay noqotaa mid caajis ah, caleemuhu waxay bilaabaan inay duubaan, ubaxa dayrta, iyo xididada midab badalaya. Sida bilowga ah, gobolka this ee warshadda keenaysaa argagax. Read More
Sweet iyo dhanaan, noocyo hore u bislaaday tamaandhada "Ruush dhadhan": faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada tamaandhada
Sharaxa iyo sawirku wuxuu soo saaraa midab casaan ah